टी–२० सिरिजः ओमानविरुद्ध नेपालको सम्भावित प्लेइङ ११ - Everest Dainik - News from Nepal
टी–२० सिरिजः ओमानविरुद्ध नेपालको सम्भावित प्लेइङ ११
काठमाडौंः पाँच देश सम्मिलित टी–२० क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत अन्तिम खेलमा आज नेपालले आयोजक ओमानसँग खेल्दै छ ।
नेपाल–ओमानबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः३५ बजेदेखि अल अम्रेट क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ ।
यो पनिः नेपाललाई निराश बनाउन सक्ने ओमानका ४ खेलाडी
नेपालले सुरुवाती २ खेलमा जित हासिल गरे पनि तेस्रो खेलमा बुधबार आयरल्याण्डसँग १३ रनले हार बेहोरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस ओमानविरुद्ध नेपालको खराब सुरुवात, पहिलो ओभरमै विकेट पतन
लिग चरणको सुरुवाती दुई खेलमा भने नेपालले हङकङ र नेदरल्याण्डलाई पराजित गरेको थियो ।
सिरिजको अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीविरुद्व नेपाल अप्रत्यासीत जित निकाल्न चाहन्छ । यता, तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको घरेलु टोली ओमान भने नेपालमाथि जित हात पार्दै सिरिज उपाधि कब्जा गर्ने लक्ष्यमा छ ।
जारी सिरिजमा ओमानले आयरल्याण्ड, हङकङ र नेदरल्याण्डलाई हराइसकेको छ । ओमान ३ खेलबाट ६ अंक जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ । नपाल मात्र ४ अंक बटुल्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल भर्सेस ओमान, नेपाललाई दोस्रो झड्का, कप्तान खड्का आउट ! [LIVE]
नेपालको प्लेइङ ११ मा कुशललाई मौका !
जारी सिरिजमा नेपालले तीन खेल खेल्दा युवा अलराउन्डर कुशल मल्ल बेन्चमा बसेका छन् ।
लामो ‘सट’ प्रहार गर्नसक्ने मल्ललाई आज नेपालले प्लेइङ ११ मा राख्ने सम्भावना छ ।
अघिल्लो खेलमा आयरल्याण्डविरुद्ध सन्दीप जोरा सस्तैमा आउट हुँदा प्लेइङ ११ मा कुशलको सम्भावना बढेको हो ।
सिंगापुरमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा खराब प्रदर्शन गरेका उनलाई कप्तान पारस खड्काले फेरि एकपटक परीक्षण गर्न चाहन्छन् ।
विनोद भण्डारी (विकेटकीपर)
ट्याग्स: nepal vs oman, T20 cricket